Ambongadiny havia havia sy ankavanan'ny hety fanapahana hety mpanety mpanety sy mpamatsy | Icool
Gunting manety volo havia sy havanana
Modely ： IC-55
● Ny hety manapaka volo matihanina mirefy 5.5-miavaka dia natao ho an'ny mpanao hatsaran-tarehy matihanina. Izahay dia mandray tsara ny tànana ankavanana sy ny tànana havia amin'ny fotoana iray, ka namorona hety havia sy havanana izahay.
● Ny hety dia vita amin'ny vy tsy misy fangarony avo lenta, ary ny hamafin'ny Rockwell amin'ny vy dia mahatratra 61HRC. Haircuts matihanina vita amin'ny vy tsy misy fangarony avo lenta dia mateza sy maranitra. 100% vita tanana, vita kanto, dia ny fomban'ny kalitao avo lenta. Indrindra indrindra, ny fomba fanamboarana mitambatra dia raisina mba hahatonga ny hety hatanjaka kokoa sy haharitra kokoa.
● Ny hety manapaka volo mahitsy no tena ampiasaina amin'ny fanalefahana ny fahadiovan'ny volo, ny fanapahana ny volo ary ny fanapahana ny faran'ny volo. Ny sisin'ny hety dia miolaka, izay manatsara ny hery mpamily ary mahatonga azy io ho mora ny manao taovolo miloko.
● Ity hety ity dia manana lelany tery sy tendrony manify, izay mety amin'ny fakana volo. Miaraka amin'ny famolavolana tànana 3D an-tànana, misokatra sy mihidy tsara ny hety ary manapaka tsy misy fika. Ny hety dia kely lanja ary mahatsapa tsara amin'ny tanany. Na dia ampiasaina mandritra ny fotoana lava aza izy ireo dia tsy hanavesatra ny tanana.
Gunting mpanety tanana havanana sy havia
Teo aloha: Hety barety fanamboarana bolo vaovao miaraka amin'ny nify antler
Manaraka: Gunting manety volo matihanina amin'ny hety misy volo